आहा टक Archives - AahaSanchar
Home आहा टक
आहा टक मनिषा बुढामगर, बांफिकोट गाउपालिका १०, रुकुम पश्चिम हिजो आज कता व्यस्तहुनुहुन्छ ? म आफ्नै व्यापार तथा सिलाई कटाइ व्यवसायमा व्यस्त छु । यस क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर कसरी मिल्यो ? यस क्षेत्र मेरो रुचिको क्षेत्र भएकोले २०६५ सालमा खलगाको दिल टेलर्समा ६ महिना तालिम सिकेर र अन्य टेलर्समा…
आहा टक अंशु केसी मुसिकोट नगरपालिका १, रुकुम पश्चिम त्रिभुवन जनता माबिमा कक्षा १० मा अध्यनरत । पढाई लेखाई कसरी चल्दै छ ? मेरो पढाई लेखाई राम्रो संग चल्दै छ । अहिले एसईई भएकाले कडा मेहनतका साथ पढिरहेकि छु । यसका साथै ट्युसन क्लास पनी लिने गरेकि छु । त्यसैले…
आहा टकमा : सूर्य बहादुर गिरी, संचालक, सुर्य काष्ठ उद्योग, मुसिकोट रुकुम पश्चिम व्यवसाय क्षेत्र कसरी चल्दै छ ? व्यवसायीक क्षेत्र राम्रै चलिरहेको छ । सन्तोषजनक नै छु । सबै ग्राहकहरुले माया गरिरहनु भएकै छ त्यसैले म संग गुणस्तरिय फनिचरहरु पाइैने भएकोले ग्राहकहरु खोजी खोजी म कहा आउनुहुन्छ । अहिले…
स्तम्भ : आहा टक अमितबाबु रोकाय पेसाले कलाकार हुनुहुन्छ ?कसरी चल्दैछ कलाकारिता क्षेत्र? अब दिन त जे होस कटेकै छ, यहि गीतसंगीत मै कहिले सिर्जना गर्दै, कहिले हार्मोनियममा बसेर भाका बनाउदै,कहिले स्टुडियो रेकर्डमा,कहिले भिडियो सुटिङमा गएर यस्तै यस्तै छ । कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको झन्डै कति बर्ष भयो ? सानै देखि…
रोजगार खोज्ने होईन, सृजना गरौं
आहा टक लिलबहादुर ओली, संचालक हिमाली छापाखाना, मुसिकोट हिजो आज कता के गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्योगी, व्यवसायी भएको नाताले आजभोली आफ्नै उद्योग कै काममा समय बिताईरहेको छु । कसरी उद्योगलाई माथि पु¥याउन सकिन्छ कसरी सफल व्यवसायी हुन सकिन्छ अनि कसरी धेरै भन्दा धेरै युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने कुुरामा मेरो…
आहा टक : बिष्णु बुढा भूमे गाउँपालिका ५, साकिम रुकुम पूर्व । हाल साउदी अहिले कुन देशमा हुनुहुन्छ ? म अहिले साउदी अरबमा छु । यो भन्दा पहिले म विगत ५ बर्ष श्रमिकको रुपमा नै कतार गएको थिए । त्यस बेला सीप केहि पनि लिएको थिए र धेरै दुःख बोकियो…
देबिलाल पुन, भूमे गाउँपालिका ३, सिमा रुकुम पूर्व, हाल कतार तपाईको हिजोआजको दैनिक कसरी बितिरहेको छ ? स्हाल दोहा,कतारमा छु । दैनिकी त १२ घण्टा कम्पनीको डिउटि गरेर नै बितिरहेको छ । छुट्टीको समयमा साथी भाई र आफन्तहरु संग भेटघाट गरेर गाउँ र समाजको बारेमा केहि नयाँ योजनाहरुको बारेमा भलाकुसारी…
आहा टक सीता खड्का केसी : कार्यपालिका सदस्य, बाँफिकोट गाउँपालिका हिजोआज कता व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले विशेष गरेर वर्षातको समय भएकोले गाउँघरमा जनधनको सुरक्षा गर्नमा सचेतना फैलाउने देखि नियमित घरायसी कामकाजमा पनि ब्यस्त छु । बाँफिकोटमा अन्य पहिरोको समस्या नभएपनि खोलामा बगेर मृत्यु हुने समस्या यस बर्ष झनै बढ्यो ।…